एसियाको यो एउटा देश जहाँ अहिलेसम्म कोरोना पुगेकाे छैन ! साइकल र्‍याली निकालेर मनाए विश्व स्वास्थ्य दिवस – Butwal Sandesh
एसियाको यो एउटा देश जहाँ अहिलेसम्म कोरोना पुगेकाे छैन ! साइकल र्‍याली निकालेर मनाए विश्व स्वास्थ्य दिवस
कोरोना भाइरसबाट विश्वका २ सय ११ देश चपेटामा परेका भए पनि तुर्केमेनिस्तानमा अहिलेसम्म कोरोना सं क्रमण देखिएको छैन। त्यहाँको सरकारले दाबी गरेको छ- तुर्केमेनिस्तानमा एक जना पनि कोरोना सं क्रमित छैनन्।
तुर्क स्वास्थ्य प्रणालीको अध्ययन गरिरहेका लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका प्राध्यापक मार्टिन मेक्की सो देशमा कोरोना सं क्रमित नभएको विषयमा विश्वास गर्दैनन्। भन्छन्, ‘तुर्केमेनिस्तानले आधिकारिक भनेर जारी गरेका तथ्यांकमा भरोसा गर्न सकिँदैन।’ सरकारले सत्यलाई लुकाइरहेको हुनसक्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन्।
‘एक दशक अगाडि उनीहरुले एचआइभी/एड्स सं क्रमित कोही नभएको दाबी गरेका थिए। त्यो साँचो सावित भएन। यो आँकडा पनि भरोसा योग्य छैन। सन् २००० मा उनीहरुले प्लेगका कैयौं रो गीहरुको अवस्था लुकाएकोबारे हामी जानकार छौं’, मार्टिन भन्छन्। सरकार कोरोना संक्रमित छैनन् भने पनि यसबारे जनमानसमा ठूलो त्रास छ। यसको अर्थ पहिलैदेखि सं क्रमित रहेको हुनसक्छ। तुर्केमेनिस्तान राजधानी अस्गवादमा मंगलबार निकालिएको साइकल र्याली। तस्विर: एएफपी